ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်သင်ဘာကိုတွေ့ရှိရသနည်း | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 10, 2009 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 18, 2014 Douglas Karr
အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်း၌ပေါင်းစည်းခြင်းသည်ယခုအတော်အတန်ကြာနေသော်လည်းအမှန်တကယ်မှာမကြာသေးမီက ပို၍ ဝေဖန်လာသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကောင်းစွာဒီဇိုင်းဆွဲရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်အကြောင်းအရာကိုဖော်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ web site ၏ဒီဇိုင်းနှင့် search engine optimization သည် site တစ်ခုအောင်မြင်ရန်အတွက်အတူတကွစုစည်းရန်လိုအပ်သည်။
လူမှုမီဒီယာ, အထူးသဖြင့် တွစ်တာ, ကဲ့သို့သော social bookmarking sites များမှစျေးကွက်ဝေစုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုခိုးယူနေသည် digg, အရသာရှိသော နှင့် StumbleUpon.
ငါဒီအကြောင်းကိုအချိန်အတန်ကြာဟောပြီးပြီဆိုတော့ငါဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆိုတာစိန်ခေါ်တာတရားမျှတတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ညကအလားအလာတစ်ခုကငါ့ကို Laguna သဲသောင်ပြင်မှခေါ်ပြီးကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ခဲ့သနည်းဟု ဦး စွာမေးခဲ့သည်။ ငါခြုံငုံသုံးသပ်ပေး၏ DK New Media သင်၏အိမ်အတွက်အထွေထွေကန်ထရိုက်တာတစ် ဦး ၀ ယ်ခြင်းနှင့်တူသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်၎င်း၏အောင်မြင်မှုကိုသေချာစေရန်အတွက်အရာအားလုံးကိုအတူတကွထားခြင်းကိုကျွန်ုပ်နားလည်သည်။ SEO ဆိုတာကိုပြောပြီး“ မင်းဘာကိုရှာနေတာလဲ” လို့မေးတဲ့အခါငါအရမ်းအံ့သြသွားတယ်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ငါဟာအချိန်အတန်ကြာတိကျတဲ့သော့ချက်စာလုံးတွေကိုမလိုက်ခဲ့ဘူး။ ငါလိုက် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ, အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ နှင့် Martech Zone။ ကျွန်ုပ်သည် Marketing Tech အတွက်နံပါတ် ၂ ဖြစ်ပြီးအခြားသူများအတွက်နံပါတ် ၁ ဖြစ်သည်။ ငါ၌အခြားအနံ ၁ အစက်အပြောက် ၂၀ ခန့်ရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်မသင့်လျော်ပါ။
ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောမေးခွန်းကြီးနှင့်ငါချက်ချင်းတုန့်ပြန်နှင့်စာရင်းကိုချွတ်နိုင်ခဲ့သင့်ကြောင်းတ ဦး တည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များထက်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့ပိုမိုစိုးရိမ်သည်။ နောက်ထပ်မှတ်ချက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု၏ဗေဒနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျမှန်ကန်သောဝေဖန်မှုဖြစ်သည်။ ငါ၏အဆိုဒ်များအချို့စို့။ 🙂
မင်းကအေဂျင်စီတစ်ခုရှိရင် SEO ဆိုသည်မှာ သင့်ဆိုဒ်ခေါင်းစဉ် tag ရဲ့အဆုံးမှာ၊ ရှာဖွေမှုမှာသင်ရှာတွေ့သည့်အရာ၏မေးခွန်းကိုသင်ကောင်းကောင်းဖြေနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထိုရှာဖွေမှုကိုသင်အနိုင်ရလိမ့်မည်။ (မင်းဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုသိချင်ရင်ငါအကြံပေးချင်ပါတယ် Semrush).
ငါ့မျှော်လင့်ချက်အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ငါလင်းနို့ပယ်ကြောင်းဖြေနိုင်ဘူး။ ယခုတွင်ငါသည်ပိုမိုနီးကပ်စွာအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်တူသောအခြားယှဉ်ပြိုင်မှုစည်းကမ်းချက်များကိုအနိုင်ရရှာဖွေနေပါလိမ့်မယ် အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်မည်၊
ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့မကြာသေးခင်ကတင်ပြချက်ပါ Blogging နှင့် Search Engine Optimization - သော့ချက်စာလုံးများကိုမည်သို့မြှင့်တင်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။
Tags: seo bloggingအရသာရှိသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာအွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationရှာဖွေရေးအင်ဂျင်semrushseoblogging အတွက် seoတွစ်တာ
၂၀၁၀ - စစ်ထုတ်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း၊
Hamilton က Wallace
ဒီဇင်ဘာ 13, 2009 မှာ 11: 18 AM
ငါ့ရဲ့ကလေးတွေကဖိနပ်မရှိတဲ့တုံးလုံးလေးတွေကိုငါ့ဝေစုခွဲခဲ့တယ်။ ဂူဂဲလ်မှသင်ထင်မြင်သောသော့ချက်စာလုံးများနှင့်နံပါတ်များကိုသယ်ဆောင်ပေးသောသော့ချက်စာလုံးများ (နောက်မှလိုက်သင့်သည်) ကိုရှာဖွေသောလူအများအသုံးပြုသောသော့ချက်စာလုံးများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၏အဆုံးမဲ့တုံ့ပြန်မှုကွင်းဆက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဂူးဂဲလ်၏ Webmaster ကိရိယာများကို သုံး၍ ကျွန်တော်အဆင့်အတန်းမြင့်မားသောအသုံးအနှုန်းများကိုရှာဖွေလိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတိုင်ပင်ခံများစွာသည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ဤနည်းအတိုင်းလာနေသည်ကိုတွေ့ရပြီးယခုသူတို့အား ၀ န်ဆောင်မှုများပေးနေသည်။